Guddiga wacyigelinta Puntland oo maalintii 6-aad farriimo isugu dhafan feejignaan & digniin u diray shacabka Puntland. – Radio Daljir
Guddiga wacyigelinta Puntland oo maalintii 6-aad farriimo isugu dhafan feejignaan & digniin u diray shacabka Puntland.
Agoosto 5, 2010 12:00 b 0
Garowe, Aug 05 – Dahir X. Khaliif, wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka ee Puntland ayaa kulankii maanta ee guddiga wacyigelinta shacabka Puntland la hadlay ganacsatada iyo mulkiilayaasha huteelada & gaadiidka, uguna baaqay in ay u toog hayaan dadka danaha gaar ah leh ee lur mooyee aan dheef u lahayn bulshada, kana imanaya gobollada kale ee Somaliya …
Idaacada Daljir. http://daljir.com/
Issimada Buuhoodle & bariga Burco oo shir ku yeeshay Xadhadhan, kana soo saaray qodobo heshiis ah.
Garaad Jaamac oo ku gacan sayray baaqii M/weyne Siilaanyo ee wadahadal dhex mara Issimada SSC & maamulka Somliland.